May 6, 2021 - Achawlaymyar
ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် လူမသိသူမသိ အချစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေ(ပုံကိုနှိပ်ပြီးဖတ်ပါ)
May 6, 2021 by Achawlaymyar
ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် လူမသိသူမသိ အချစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေ(ပုံကိုနှိပ်ပြီးဖတ်ပါ) ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် လူမသိသူမသိ အချစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေ တစ်ချို့လူတွေက အချစ်ဆိုတာကို အယုံအကြည်မရှိကြသလို၊ တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း မချစ်ရမနေနိုင်ကြပြန်ဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ ခံယူချက်တွေကသာ အမှန်လို့ ထင်တတ်ကြတာပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာ အစွန်းတစ်ဖက် ရောက်မသွားတာကတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ခုပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းကတော့ အချစ်မှာ ဒီလို ကောင်းကျိုးလေးတွေလည်း ရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင့်ပေါ့။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ကို တိုးမြှင့်ပေးတယ် အချစ်က စိတ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ လူတစ်ယောက် အချစ်ကို ခံစားမိတဲ့အချိန်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားတွေကအစ ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အကောင်းမြင်စိတ်တွေ များနေတတ်ပြီး စိတ်ပျော်ရွှင်နေတတ်ပါတယ်တဲ့။ နုပျိုစေတယ် အချစ်က … Read more
မျက်နှာအလှပျက်စေတဲ့ အလေ့အကျင့်ဆိုး (၅) ခု
မျက်နှာအလှပျက်စေတဲ့ အလေ့အကျင့်ဆိုး (၅) ခု ခေါင်းကဆံပင်ကို ကိုင်ပြီး နုတ်နေတာ၊ ချိုးနေတာမျိုးကလည်း သင့်မျက်နှာအလှကို ပျက်စေပါတယ်။ ၁ – မျက်နှာကို ကိုင်တယ် မျက်နှာကို ခဏခဏ ကိုင်တဲ့ အကျင့်ရှိတာ မကောင်းပါဘူး။ လက်မှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေးတွေဟာ မျက်နှာကို ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်။ ၂ – နှုတ်ခမ်းကို လျှာနဲ့သပ်တယ် နှုတ်ခမ်းခြောက်တယ်ဆိုရင် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးဆေး အကြည်မျိုး ဆိုးထားသင့်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းကို ခဏခဏ သပ်တာဟာ ရုပ်ဆိုးတဲ့ အကျင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃ – မျက်လုံးကို ပွတ်တယ် မျက်လုံးတစ်ဝိုက်က အရေပြားဟာ ပါးလွှာပါတယ်။ မျက်လုံးကို ပွတ်တာမျိုးလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ၄ – ဝက်ခြံ ညှစ်တယ် ဝက်ခြံကို ညှစ်လိုက်ရင် ပြန့်သွားပါတယ်။ ပျောက်သွားတဲ့အခါ … Read more
မနေ့ည၈နာရီကျော်ကျော်လောက်ကကျနော်လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့သောက်နေကျဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်….. ထိုင်ခုံကမရှိတော့ကိုရင်လေးထိုင်နေတဲ့စားပွဲမှာပဲဝင်ထိုင်လိုက်တယ်စားပွဲထိုးကောင်မလေးကကျနော့်အတွက်…. လက်ဖက်ရည်ခွက်ချပေးနေတုန်းကိုရင်လေးကမေးလိုက်တယ်…. ဒကာမလေးးကိုရင်မှာထားတာကြာပီလေမရသေးဘူးးလားတဲ့….. ကျနော်လည်းးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်မေးလိုက်မိတယ်….ကိုရင်ကဘာမှာထားတာလဲလို့…..ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားမှာထားတာ….. အဲဒါနဲ့ကျနော်လည်းးပြန်မေးလိုက်တယ်…..ကိုရင်ကဒီအချိန်စားလို့မရဘူးလေဆိုတော့….မဟုတ်ဘူးးအမေ့အတွက်တဲ့….. အခုထိမရသေးဘူးးအမေကမျှော်နေတော့မှာပဲ….သူကပြန်ဖြေတော့… ကျနော်သောက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ဖိုးရယ်ကိုရင်ဟာရယ်ပေါင်းရှင်းလိုက်တယ်….. ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုရင့်အမေဆီကိုလိုက်ပို့ပေးပါ့မယ်….. တပည့်တော်မှာဆိုင်ကယ်ပါပါတယ်ဘုရားလို့ပြောပီးးလိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်… ကိုရင်ကသူ့အမေရှိတဲ့နေရာမြို့ရှောင်လမ်းဘက်ကိုမောင်းခိုင်းပါတော့တယ်….. မြို့ရှောင်လမ်းထဲရောက်တော့ဘယ်ဘက်ကိုချိုးဝင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့သင်္ချိုင်းကုန်းထဲဝင်ခိုင်းတယ်ဗျာ…. ကျနော်တော်တော်လန့်သွားတယ်ညက၈နာရီကျော်ပီလေ…..သင်္ချီုင်းကုန်းဆိုတာတိတ်ဆိတ်နေတာကြက်သီးတွေတဖြန်းဖြန်းထလာတယ် ဒါပေမယ့်ကျနော်ကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ကိုရင်လည်းပါတယ်ဆိုပီးအားတင်းဝင်လိုက်တယ်….. အဲဒီမှာကိုရင်ကဆင်းပီးဓါတ်မီးလေးနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ပြီး…..အုပ်ဂူလေးးတစ်လုံးပေါ်တက်ထိုင်ပြီး…… အမေအမေကြိုက်တဲ့ချိုစိမ့်ရယ်ပဲနံပြားရယ်….သားလာပို့တာပါသားကိုခွင့်လွှတ်ပါအမေရယ်တဲအမေမသေခင်တုန်းကမပြုစုခဲ့ရတာတွေ…. သားအခုမှယူကြုံးမရဖြစ်နေပြီအမေရယ်တဲ့အဲလိုတွေပြောပြီးတော့ကိုရင့်ကအဲ့ဒါကိုရင့်အမေရဲ့အုပ်ဂူလေးပဲတဲ့….. မသေခင်တုန်းကလုပ်မကျွေးနိုင်ခဲ့လို့အခုလာပို့တာပါလို့သူပြောတဲ့စကားနားထောင်းရင်း….ကျနော်သူ့ကျောင်းထိပြန်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်…. ကျနော်သံဝေဂတစ်ခုရလိုက်တယ်…..သူတောင်သေသွားတဲ့မိခင်ကိုသင်္ချီုင်းကုန်ထိလိုက်ကျွေးနေသေးတာ…. ငါတို့ကအခုအသက်ရှိနေတဲ့မိခင်ကိုပိုတောင်ဂရုတစိုက်ကျွေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့အသိတရားရလိုက်ပီလေ….. ကိုယ့်ကိုမွေးပေးတဲ့မိခင်ဆိုတာတစ်သက်လုံးတစ်ယောက်ပဲရှိတာမို့….အစားထိုးးမရတဲ့အနန္ဒဂိုဏ်းဝင်ကျေးဇူးရှင်ကိုအသက်ရှင်နေတုန်း….. လုပ်ကျွေးသမှုပြုကြရင်းနဲ့ကျေးဇူးးဆပ်ကြရအောင်သူငယ်ချင်းတို့ရေအခုတော့…..ကျနော်ရယ်ကိုရင်ရယ်သင်္ချိုင်းကငြိမ်သက်နေတဲ့အုပ်ဂူလေးးရယ်… Credit:တောင်ပံနီလူလေ မေန႔ည၈နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ကက်ေနာ္လက္ဖက္ရည္ေသာက္ဖို႔ေသာက္ေနက်ဆိုင္ထဲကိုဝင္လိုက္တယ္….. ထိုင္ခုံကမရွိေတာ့ကိုရင္ေလးထိုင္ေနတဲ့စားပြဲမွာပဲဝင္ထိုင္လိုက္တယ္စားပြဲထိုးေကာင္မေလးကက်ေနာ့္အတြက္…. လက္ဖက္ရည္ခြက္ခ်ေပးေနတုန္းကိုရင္ေလးကေမးလိုက္တယ္…. ဒကာမေလးးကိုရင္မွာထားတာၾကာပီေလမရေသးဘူးးလားတဲ့….. က်ေနာ္လည္းးမေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ေမးလိုက္မိတယ္….ကိုရင္ကဘာမွာထားတာလဲလို႔…..ခ်ိဳစိမ့္နဲ႔ပဲနံျပားမွာထားတာ….. အဲဒါနဲ႔က်ေနာ္လည္းးျပန္ေမးလိုက္တယ္…..ကိုရင္ကဒီအခ်ိန္စားလို႔မရဘူးေလဆိုေတာ့….မဟုတ္ဘူးးအေမ့အတြက္တဲ့….. အခုထိမရေသးဘူးးအေမကေမွ်ာ္ေနေတာ့မွာပဲ….သူကျပန္ေျဖေတာ့… က်ေနာ္ေသာက္တဲ့လက္ဖက္ရည္ဖိုးရယ္ကိုရင္ဟာရယ္ေပါင္းရွင္းလိုက္တယ္….. ၿပီးေတာ့တပည့္ေတာ္ကိုရင့္အေမဆီကိုလိုက္ပို႔ေပးပါ့မယ္….. တပည့္ေတာ္မွာဆိုင္ကယ္ပါပါတယ္ဘုရားလို႔ေျပာပီးးလိုက္ပို႔ေပးလိုက္တယ္… ကိုရင္ကသူ႔အေမရွိတဲ့ေနရာၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းဘက္ကိုေမာင္းခိုင္းပါေတာ့တယ္….. ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းထဲေရာက္ေတာ့ဘယ္ဘက္ကိုခ်ိဳးဝင္ခိုင္းတယ္ၿပီးေတာ့သခ်ႋဳင္းကုန္းထဲဝင္ခိုင္းတယ္ဗ်ာ…. က်ေနာ္ေတာ္ေတာ္လန္႔သြားတယ္ညက၈နာရီေက်ာ္ပီေလ…..သခ်ႌဳင္းကုန္းဆိုတာတိတ္ဆိတ္ေနတာၾကက္သီးေတြတျဖန္းျဖန္းထလာတယ္ ဒါေပမယ့္က်ေနာ္ေၾကာက္စိတ္ကိုဖယ္ၿပီးေတာ့သကၤန္းၿခဳံထားတဲ့ကိုရင္လည္းပါတယ္ဆိုပီးအားတင္းဝင္လိုက္တယ္….. အဲဒီမွာကိုရင္ကဆင္းပီးဓါတ္မီးေလးနဲ႔ဟိုၾကည့္ဒီၾကည့္ၾကည့္ၿပီး…..အုပ္ဂူေလးးတစ္လုံးေပၚတက္ထိုင္ၿပီး…… အေမအေမႀကိဳက္တဲ့ခ်ိဳစိမ့္ရယ္ပဲနံျပားရယ္….သားလာပို႔တာပါသားကိုခြင့္လႊတ္ပါအေမရယ္တဲအေမမေသခင္တုန္းကမျပဳစုခဲ့ရတာေတြ…. သားအခုမွယူႀကဳံးမရျဖစ္ေနၿပီအေမရယ္တဲ့အဲလိုေတြေျပာၿပီးေတာ့ကိုရင့္ကအဲ့ဒါကိုရင့္အေမရဲ႕အုပ္ဂူေလးပဲတဲ့….. မေသခင္တုန္းကလုပ္မေကြၽးႏိုင္ခဲ့လို႔အခုလာပို႔တာပါလို႔သူေျပာတဲ့စကားနားေထာင္းရင္း….က်ေနာ္သူ႔ေက်ာင္းထိျပန္လိုက္ပို႔ေပးလိုက္ပါတယ္…. က်ေနာ္သံေဝဂတစ္ခုရလိုက္တယ္…..သူေတာင္ေသသြားတဲ့မိခင္ကိုသခ်ႌဳင္းကုန္ထိလိုက္ေကြၽးေနေသးတာ…. ငါတို႔ကအခုအသက္ရွိေနတဲ့မိခင္ကိုပိုေတာင္ဂ႐ုတစိုက္ေကြၽးသင့္တယ္ဆိုတဲ့အသိတရားရလိုက္ပီေလ….. ကိုယ့္ကိုေမြးေပးတဲ့မိခင္ဆိုတာတစ္သက္လုံးတစ္ေယာက္ပဲရွိတာမို႔….အစားထိုးးမရတဲ့အနႏၵဂိုဏ္းဝင္ေက်းဇူးရွင္ကိုအသက္ရွင္ေနတုန္း….. လုပ္ေကြၽးသမႈျပဳၾကရင္းနဲ႔ေက်းဇူးးဆပ္ၾကရေအာင္သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရအခုေတာ့…..က်ေနာ္ရယ္ကိုရင္ရယ္သခ်ႋဳင္းကၿငိမ္သက္ေနတဲ့အုပ္ဂူေလးးရယ္… Credit:ေတာင္ပံနီလူေလ
” စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး ဖတ်ဖို့ “ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကအများသောအားဖြင့် အချစ်ကံ ခေကျတာများပါတယ် ။ သင်က စိတ်ထားကောင်းတော့ သင် ချစ်တဲ့ သူတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့ကကျတော့သင့်အပေါ် ဘာလို့ မကောင်းရတာလဲ ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးမှာ ဆိုးတဲ့ယောင်္ကျားတွေချည်းပဲ ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ သင့်ရဲ့ ဝေဒနာတွေ လျော့ပါးသက်သာဖို့အတွက် ဒီအချက်လေးတွေကို သိထားဖို့ လိုပါတယ် ။ သင့်မှာ ပြဿနာရှိနေတာ မဟုတဘူး…… အချစ်ကံခေတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု မပျောက်ပါနဲ့ ။ ရွေးချယ်မှုမှားခဲ့တာက လွဲလို့ သင် ဘာများမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး ။ သူ သင့်ကို ထားမသွားခင်တုန်းကလိုပဲ သင်ဟာလှနေတုန်း ၊ ထက်မြက်နေတုန်းပါ ။ အဲ့ဒီတော့ … Read more
အချစ်စစ်တကယ်ရှိကြောင်း သက်သေပြလိုက်တဲ့ စုံတွဲ
အချစ်စစ်တကယ်ရှိကြောင်း သက်သေပြလိုက်တဲ့ စုံတွဲ အချစ်စစ်ဆိုတာ တကယ်မရှိဘူးလို့ ဆိုသူတွေအတွက် ဒီစုံတွဲကို သာအတုယူစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်တကယ်တန်ဖိုးထားချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူ ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက် ၊ချို့ယွင်းချက်မှန်သမျှ ကို နားလည်သည်းခံပြီး လက်တွဲပေးတဲ့သူမျိုးပါ လက်တလောလူမှုကွန်ရက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက အောက်ဖော်ပြပါ ဇနီးမောင်နှံကတော့ အချစ်စစ်ရဲ့ သဘောသဘာဝကို ပြသလိုက်တဲ့ စံပြထားရမယ့် စုံတွဲပါပဲ။ ပုံထဲကအမျိုးသမီး ဟာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်မရှိပေမယ့် သူမကို ဂရုတစိုက်ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ချစ်ခင်တဲ့ ခင်ပွန်းသည် ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမတို့ ဇနီးမောင်နှံမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးအဖြစ် အားလုံးရဲ့ ချီးကျုးလေးစားမှုတွေကို ရရှိထားတာပါ။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဇနီးသည်အပေါ် မငြိုငြင်ပဲ ဒီလိုမျိုးတန်ဖိုးထားချစ်ခင်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အမျိုးသားရဲ့ စိတ်ထားကိုတော့ အတုယူသင့်ပါတယ်နော်။ ဘော်ဘော်တို့ မှာရော ချစ်သူက … Read more
သင့်ကို မချစ်နိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကို အတင်းကြီး တွယ်ကပ်မနေပါနဲ့
ဒီလိုတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင် ခေါင်းအုံးကို သန့်အောင် ဂရုစိုက်နော်
နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ကိုယ်မသိလိုက်ခင်မှာပဲ ကိုယ့်ရဲ့အလှအပနဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သင့်ရဲ့ ဆံပင်နဲ့မျက်နှာအသားအရေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေပါ။ တကယ်လို့ ဒီလက္ခဏာတွေ ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ခေါင်းအုံးကြောင့်ဖြစ်နေနိုင်တာကြောင့် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာ အောက်မှာ ဆက်ပြီးဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ (၁) ဝက်ခြံတွေပေါက်လာတယ် သင့်မျက်နှာမှာ တခြား ထွေထွေထူးထူး အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ဝက် ခြံ တွေတအားထွက်နေတယ် ဆိုရင်တော့ သင့်ခေါင်းအုံး နဲ့ ခေါင်းအုံးစွပ် ညစ်ပတ်နေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ညစ်ပတ်တဲ့ခေါင်းအုံးဟာ ပါးပြင်ကို ထိကပ်တဲ့အခါ ဘက်တီးရီးယားတွေကနေတစ်ဆင့် ဝက်ခြံဖြစ်ပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ (၂) အရေးကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ် သင်အိပ်တဲ့ပုံစံ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းအုံးစွပ်က သင့်မျက်နှာမှာ အရေးကြောင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ခေါင်းအုံးစွပ်ဟာ သင့်မျက်နှာကို ပွတ်ဖန်များလာတဲ့အခါမှာ အရေးကြောင်းတွေဖြစ်သွားတာပါ။ (၃) ဆံပင်တွေ ကျိုးကြေကုန်တယ် ကြမ်းတမ်းတဲ့ခေါင်းအုံးစွပ်ဟာ ဆံပင်ကိုပွတ်တိုက်ဖန်များလာတဲ့အခါ သင့်ဆံပင်ဟာ … Read more
သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သစ်ပင်က ပြောပြမယ့် မကြာခင် သင်ကြုံတွေ့ရမယ့် အရာများ လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ စိတ်ထဲမှာ မျှော်လင့်ချက် ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သင်ရွေးလိုက်တဲ့ သစ်ပင်လေးက ပြောပြပေးမယ့် သင့်ရင်ထဲက မျှော်လင့်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးသစ်ပင်လေးကိုရွေးပြီး အဖြေကိုကြည့်လိုက်နော်။ (၁) သကြားပင် သင်ဟာ ခံစားလွယ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အချိန်တော်တော် များများကို သင့်ကို လူတွေဘယ်လို ထင်နေလဲ ဆိုတဲ့အတွေးတွေမှာ အကုန် ခံလေ့ ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာ သင့်ဘဝထဲကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအပြည့်နဲ့၊ သင့်ကို ချစ်ပေးနိုင်မယ့် သင်နဲ့အလိုက် ဖက်ဆုံးသူတစ်ယောက် ရောက်လာတော့ မှာပါ။ သင့်ရဲ့ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ ဘဝကြီးဟာ သာယာ လာတော့မှာပါ။ (၂) သစ်အယ်သီးပင် သင်ဟာ အရမး်လက်တွေ့ကျပြီး အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင် နေတတ်သူပါ။ သင်ဟာ အရမ်းကို ခင်မင်စရာကောင်းတဲ့သူပါ။ … Read more
ကျား/မ အားလုံးတို့၏ အကြိုအကြားနေရာတွေပါမကျန် နေရာစုံပါတဲ့ မှဲ့ ဟောကိန်း
ကျား/မ အားလုံးတို့၏ အကြိုအကြားနေရာတွေပါမကျန် နေရာစုံပါတဲ့ မှဲ့ ဟောကိန်း မှဲ့တည်နေရာနှင့် အဟောတွေပါ… လူတိုင်းမှာ မှဲ့ရှိတတ်တာမို့ ကျား/မ အားလုံး (ဗဟုသုတရအောင် တင်ပေးတာပါ) ဗဟုသုတအနေနဲ့မျှဝေတာပါ။ အမှန်ကြီးပဲလို့မ ပြော နိုင်သလို၊ အမှားတွေပါလို့လဲမဆိုသာပါဘူး။ ကိုယ့်မှာ ပါတာလေးတွေနဲ့ တိုက်ကြည်ပေါ့။ ကြိုက်လျှင်ယူ၊ မကြိုက်လျှင် ပယ်လိုက်ပါ။ ယောကျ်ားတို့၏ မှဲ့ တည်နေရာနှင့် အဟော…. ( ၁ ) နဖူးပြင်တည့်တည့်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ အစွပ်အစွဲခံရတတ်၏။ အပူသောကများလိမ့်မည်။မိမိတွင် ရှိသည်ထက်ပို၍ လူအများက ချမ်းသာ သည်ဟု ထင်မြင်တတ်ခြင်းကြောင့် ဒုက္ခတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ( ၂ ) ညာဘက်မျက်ခုံးမွေးပေါ်တွင်ရှိလျှင် ချမ်းသာတတ်ပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ လောကီစည်းစိမ်အဝဝကို သုံးဆောင် ခံစားရတတ်သည်။ ( ၃ … Read more
ကိုယ့်ကို နာကျင်စေ တဲ့သူအတွက် မကာကွယ်ပေးပါနဲ့ ကိုယ့်ကို မျက်ရည်ကျအောင် လုပ်တဲ့သူအတွက် ပျော်ရွှင်အောင် မဖန်တီးပေး ပါနဲ့ ကိုယ့်အပေါ် မကောင် းတဲ့သူအ တွက် ပေးဆပ်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ တချို့ Relationship တွေမှာ ကြည့် လိုက်ရင် တယောက်တည်းကပဲ ခံစား တယောက် တည်းကပဲ ငိုရ အဲ့ဒီတယောက် တည်းကပဲ ကိုယ့် Rs သာယာအောင် ဖန်တီး နာကျင် မှုတွေ ကြိတ်မှိတ် သည်းခံ ကိုယ့်ဘဝ တစ်ခု လုံးကို စတေး ထား မေးချင်တယ် တန်လို့လားလို့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူအတွက် ပဲလေ ခံစားရတာ တန်ပါ တယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ ဖြေချင် လိမ့်မယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် အပေါ် … Read more